मनाेरञ्जन Archives - Page 12 of 20 - Saptakoshionline
इटहरीमा फेशन शोका लागि मोडल छनौट गरिने
इटहरी । नेपाली फेशन डिजाइनरहरुले तयार पारेका पहिरनहरु राष्ट्यि तथा अन्तराष्ट्यि क्षेत्रमा बजार प्रवद्धनका लागि आकर्षण गर्न पुर्वी नेपालको इटहरीमा फेशन शो का लागि मोडल छनौट गरिने भएको छ । प्याजेन्ट नेपालले पुर्वाञ्चलमा आयोजना गर्न लागेको फेशन शो का लागि इटहरीमा यही पुस २० गते अडिसन हुने पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराइएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा प्याजेन्ट नेपालकी कार्यकारी निर्देशक ममता वस्नेतले ...
नेपाली जनचेतना मुलक सर्ट मूभी “उध्देश्य ” भाग-१ यूट्यूबमा सार्वजनिक
नेपाली जनचेतनामुलक सर्ट मूभी "उध्देश्य " भाग-१ यूट्यूबमा सार्वजनिक भएको छ। यस मुभिमा कलाकरहरु शिव भट्टराई , भावना भट्टराई , मनोज बिस्ट ,करिस्मा क्षेत्रि लगायत अन्य कलाकारहरुको अभिनय रहको छ।यस मुभिको कथा लेखन निर्देसन होम प्र. भट्टराई ले गरेका छन् भने छायांकन निर्मार्ता साथै सम्पादन खड्ग लिम्बू ले गरेका छन्।अहिलेको समयमा सम्पुर्ण जनमानिसमा अझै पनि जनचेतना अाउन नसकेको हुदा यस सर्...
इटहरी । अागामि मंसिर २८ गते देखि देशभर प्रदर्शनमा अाउन लागेकाे नेपाली कथानक चलचित्र गाेलकाे अर्काे रमाइलाे गित अाेइ कान्छि सार्वजनिक भएकाे छ । धनकुटाकाे बिभिन्न रमणिय स्थलहरूमा छायांकन गरिएकाे यस गितमा चर्चित हास्य कलाकार दमन रूपाखेति , माेडल स्मारीका खनाल र प्रकाश शुब्बाले अभिनय गरेका छन । गितमा हास्य कलाकार दमन रूपाखेति र प्रकास शुब्बाले माेडल खनाललार्इ अा अाफ्नाे पक्षमा पार्न निकै हास्यात्मक प्...
जन्मदा नाङ्गाे, मर्दा नि, जिबित हुँदा चै के काे लाज : सरस्वती लामा (भिडियो कुराकानी)
पप तथा रक गायिका सरस्वती लामा पछिल्लो समय चर्चित तथा ब्यस्त गायिकाको रुपमा पर्छिन । उस्तै किसिमका गीत संगित र उत्तेजक हाउभाउका कारण उनी चर्चा र बिवादमा मुछिँदै आएकी छिन । सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड गाँउपालिकाको गार्मा भन्ने ठाँउमा लाहुरे परिवारमा जन्मिएकी उनी सानैमा परिवार सहित काठमाण्डौ छिरेकी हुन । सानैदेखि गीत संगितमा रुचि राख्ने उनी बिगत एक दशकदेखि गायनमा सक्रिय रहेकी छिन । दर्जनौ सफल गित गा...
भुन्टी लाई बोलाउन निसान भट्टराई इटहरी दशैं किनमेल महोत्सवमा
इटहरी/ इटहरी दशैं किनमेल महोत्सवमा आज अन्तीम दिन नेपाल आइडल का निसान भट्टराईको बेजोड प्रस्तुति रहने भएको छ । नेपालको पहिलो अन्तराष्ट्रिय फ्रेन्चाइज शो नेपाल आइडल सिजन ( १ गायन प्रतियोगितामा सहभागी बनेर नेपाली संगीत प्रेमी स्रोता दर्शकका माझ चर्चित बनेका निसान भट्टराई इटहरी दशैं किनमेल महोत्सवमा इटहरीका दर्शकहरुलाई नचाउन महोत्सवमा आउने भएका हुन । निशान भट्टराई नेपाल आइडल सिजन ( १ का पहिलो रनरअप भएक...
तपाइँलाई थाहा छ भारतीय महानायक अमिताभ र उनकी श्रीमती जया बच्चनकाे सम्पति कति छ ?
काठमाण्डाै । राज्यसभामा चौथोपल्ट सदस्य बन्नका लागि केही समयअघि आफ्नो नाम दर्ता गरेकी पूर्वअभिनेत्री जया बच्चनले आफू र आफ्नो श्रीमान्‌को कुल सम्पत्ति नामंकन पत्रमा दर्ता गरेकी थिइन्। जसअनुसार जया र उनका श्रीमान् चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चनको कुल सम्पत्ति १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको छ। जयाले नामांकन पत्रमा आफ्नो सम्पत्तिको व्यहोरा दिने क्रममा आफूसँग विभिन्न बैंक र वित्तीय संस्थामा ८७ करोड ...
माडवारी समुदायमा लोकप्रिय डण्डीया नाच पहिलो पटक इटहरीमा
इटहरी । माडवारी समुदायमा लोकप्रिय डण्डीया नाच्न पहिलो पटक इटहरीमा औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्पन्न गरिएको छ । इटहरीको दुर्गा पाटी प्यालेसमा माडवारी युवा मञ्च इटहरीले आयोजना गरेका डण्डिया नाइटमा कलाकारहरुले डण्डिया नाच प्रर्दसन गरेका हुन । छिमेकी मुलुक भारतमा माडवारी समुदायको वसोवास रहेको क्षेत्रहरु राजस्थान , गुजरात लगायतमा डण्डिया नाच लोकप्रिय रहेको माडवारी समुदायका मानिसहरु वताउछन । गुजरात तथा र...
इटहरी किनमेल महोत्सवमा आज अशोक दर्जी र टंक वुढाथोकीको विषेश प्रस्तुति रहने
नबिन दहाल इटहरी । इटहरी किनमेल महोत्सवमा आज सोमवार इटहरी मा पहिलो पटक चर्चित बाल गायक अशोक दर्जीको विषेश प्रस्तुति रहने भएको छ । दर्जी सानै उमेरमा निकै नै अद्भुत गायन क्षमता भएकै कारण छोटो समयमा नै चर्चामा आएका हुन् । महोत्सवमा अशोक दर्जी सहित इटहरीको बिहानी डान्स सेन्टरको समेत आकर्षक नृत्य रहने आयोजक समितिका व्यवस्थापक बिजय गिरीले जानकारी दिए । साँझको सांगीतकि कार्यक्रम ६ बजेबाट शुरु हुने गिरीले ...
सिवानीले पहिरिइन नोबेल मिस थारु आईकनको ताज, तेजेन्द्र भए मिस्टर थारु आईकन (फोटो फिचरसहित)
बिराटनगर, २८ असोज । नोबेल शिक्षण अस्पतालको प्रायोजनमा सञ्चालित १ नम्बर प्रदेश स्तरीय ‘नोबेल मिस्टर एण्ड मिस थारु आईकन’ को उपाधि सिवानी चौधरी र तेजेन्द्र विश्वासले जितेका छन् । बिराटनगरमा भएको फाईनलमा उत्कृष्ट छनौट हुँदै सिवानीले मिस थारु आईकनको ताल पहिरिइन भने तेजेन्द्र मिस्टर थारु आईकन घोषित भए । पूर्वका १ सय १८ प्रतिष्प्रधिलाई पछि पार्दै बिराटनगर–८ स्थित मधुमारा बुद्धचौककी सिवानी र बिराटनगर–३ प...